AUKEY LS02 စမတ်နာရီနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Aircore 15W အားသွင်းစက် Gadget သတင်းများ
ဒီနေ့ Androidsis မှာမင်းကိုငါတို့စကားပြောနေတယ် နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ပေမယ့်သူတို့ကဘုံတစ်ခုခုရှိသည်။ သူတို့ကထုတ်လုပ်သူကပဲလာတယ် AUKEY, နှင့်သူတို့၏ကဏ္ in တစ်ခုချင်းစီကိုတူညီတဲ့၏ထုတ်ကုန်ပူဇော်ဖို့ကြိုးစားပါတယ် တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်။ AKEKEY သည်လုံလောက်မှုမရှိပါ နည်းပညာကဏ္ sector အတွက်လူသိများ ကြီးမားတဲ့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့သည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး နှင့်စမတ်ဖုန်းများအတွက်ထုတ်ကုန်။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ စမတ်နာရီ AUKEY LS02 နှင့် loader ကြိုးမဲ့ လေယာဉ် 15W။ ကျွန်ုပ်တို့စျေးကွက်တွင်တွေ့ရှိရသောဖြစ်နိုင်ချေ၏အကန့်အသတ်မရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်စျေးကွက်သို့လာသည့်ထုတ်ကုန်နှစ်ခု။
1 AUKEY နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်သက်ဆိုင်သည်
2 LS02 စမတ်နာရီ
2.1 LS02 စမတ်နာရီ
3 AUKEY LS02 ထူးခြားချက်များ
4 AUKEY Aircore 15W ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်
AUKEY ကုမ္ပဏီသည်၎င်းတို့အားလုံးကမ်းလှမ်းထားသောအရာကိုရရှိရန်ကြိုးစားသည် ကောင်းသောစျေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်လုပ်သူထံမှထုတ်ကုန်များစွာကိုစမ်းသပ်ရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့ရာယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည် ကောင်းသောချောနှင့်အဆင့် features တွေ။ ဒီနေ့ငါတို့ပြောမယ် ဒီအမှတ်တံဆိပ်ဒphilosophနကိုမျှဝေကြောင်းထုတ်ကုန်နှစ်ခု.
စမတ်နာရီကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုထောင့်များစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ စျေးနှုန်း၊ အကျိုးကျေးဇူးများ ဘာကမ်းလှမ်းလဲ၊ ဒီဇိုင်း ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်။ မည်သည့် ၀ ယ်ယူမှုအတွက်မဆိုဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်တွက်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကိုကြည့်ကြတာပေါ့ စမတ်နာရီ AUKEY LS02 နှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းအပေါ် လေယာဉ် 15W.
ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်နာရီတစ်လုံးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် ဒါကြောင့်သတိပညာဖြစ်သကဲ့သို့အလုပ်လုပ်တဲ့။ ပစ္စည်းတစ်ခု အာရုံကိုဆွဲဆောင်မထားဘူး သမ္မာသတိရှိကြလော့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်၎င်း၏ဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်သူသတိမပြုမိဘဲနေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ် ကိုက်ညီရန်ကြီးမားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် အများကြီးပိုမိုမြင့်မားစျေးနှုန်းများများစွာသောအခြားမော်ဒယ်များ၏။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အဆိုပါ AUKEY LS02 ဒါဟာအာရုံကိုဆွဲဆောင်ချင်ကြဘူးသောသူတို့အဘို့နာရီဖြစ်ပါတယ်။ "ပုံမှန်" အရွယ်အစားဖြင့်ပုံသဏ္orာန်နှင့်အရောင်များကိုမတောက်ပနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်aနှင့်ကွဲပြားသည်မဟုတ် ပါးလွှာပြီးကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်း။ ac နှင့်အတူတစ် ဦး ကစမတ်နာရီမီးခိုးရောင်အတွက်စတုဂံပုံသဏ္withာန်နှင့်အတူသတ္တု hasis သင့်ရဲ့ကိုက်ညီဘယ်မှာမှောင်မိုက် ၅'၂ လက်မမျက်နှာပြင်.
ယင်း၏အတွက် ညာဘက် တွေ့ပြီ ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ် အိမ်အဖြစ်, သို့မဟုတ် on / off အဖြစ်က၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ။
ထဲမှာ နောက်ဘက် ငါတို့တွေ့ပြီ နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာ ကျနော်တို့လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာရှိစဉ်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာနိုင်စွမ်း။ မြန်ဆန်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုင်းတာမှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများလုပ်သောအခါအသုံးဝင်သောအရာတစ်ခု။ ဒါ့အပြင်၎င်း၏နောက်ကျော၌ငါတို့ရှာပါ ဘက်ထရီအားသွင်းများအတွက်သံလိုက်တံသင်။
သူ့ကိုကိုင်ပါ UKEY LS02 10% လျှော့စျေးနှင့်အတူတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ
ခါးပတ် မိမိအသတိပညာအချက်များအခြားဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအရအကျယ်အကျယ် အနက်ရောင်အညိုရောင်။ သို့သော်အလွန်သာယာသောနှင့်တစ်သောထိတွေ့မှုနှင့်အတူ ကောင်းစွာပျှမ်းမျှအထက်အရည်အသွေး ကျွန်တော်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြသောအခြားမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။
AUKEY LS02 ထူးခြားချက်များ
အရာရာကိုကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ AUKEY LS02 သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသတိရဖို့ရှိသည် ကျနော်တို့ချွေတာစဉ်းစားနိုင်မယ့်ကိရိယာ အခြားမော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ သို့သော်၎င်းသည်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသောကြောင့် LS02 ၏အကျိုးကိုလုပ်ဆောင်သည်။
သင်၏မျက်နှာပြင်မှစတင်ပါ ၁.၄ လက်မအကျယ်ရှိသော TFT panel ကို နှင့် 320 x 320 dpi resolutionဒီအရွယ်အစားအတွက်လုံလောက်သောထက်ပို။ နေရောင်ခြည်မှာတောင်ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ရှိပါတယ် Brightness level settings ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းရောင် ၄ မျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ များစွာသောအခြားကိရိယာများတွင်ပျောက်နေသောအရာတစ်ခုခု
Timing သည် AUKEY LS02 ၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်, သင်သည်လက်လွတ်နိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားစာရှိလိမ့်မည်။ သင်ပြုပြင်နိုင်သည် စမတ်သတိပေးချက်များ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိစာများဖတ်ပါ၊ သင်အကြိုက်ဆုံးလူမှုကွန်ယက်များမှအသိပေးချက်များ.
Un သင်အကြိုက်ဆုံးအားကစားလုပ်ရန်စံပြအဖော် သင်၏လက်ကောက်ဝတ်မှဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာ AUKEY LS02 ဖြစ်သည် တကယ်တော့နည်းနည်းလေးတယ်, သင်ကဝတ်ဆင်ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့ရှာတယ် အထိ 12 အားကစားပုံစံများ သငျသညျသယ်ဆောင်ရန်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကြောင်း သင့်ရဲ့ကယ်လိုရီကိုစားသုံးသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ကီလိုမီတာ၏ထိန်းချုပ်မှု။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေချမှတ်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
ချွေးများသို့မဟုတ်ရေများများကြောင့်သင်၏နာရီပျက်စီးသွားမည်ကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပေ။ AUKEY LS02 ၏အင်္ဂါရပ်များ IP68 လက်မှတ် ဖုန်နှင့်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အပူချိန်သည်-20ºမှ45ºအကြားရှိ။ ယခု AUKEY စမတ်နာရီကိုဝယ်ပါ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အထူးလျှော့စျေး LS02 ။
နှင့်အသုံးပြုသူများကိုအများဆုံးတန်ဖိုးထားသောရှုထောင့်တစ် ဦး အတွက်, အ ဘက်ထရီသက်တမ်းဒါကလည်းတိုင်းတာသည်။ AUKEY LS02 ကကမ်းလှမ်းသည် အသုံးပြုမှုရက်ပေါင်း 20 ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ smartwatch charger ဘယ်ကထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသင်လုံးဝမေ့သွားလိမ့်မယ်။ အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် AUKEY LS02 သည်စမတ်နာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။
AUKEY Aircore 15W ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်
ဤ post ၏အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း AUKEY သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ထုတ်လုပ်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာတွင်လူသိများသည်။ ငါတို့ပြောနိုင်တယ် charging တွဲဖက်ပစ္စည်းများသည်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာပါ တစ် ဦး သံလိုက်ကြိုးမဲ့ charger ကို ဒါကြောင့်ကြော့ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အသုံးဝင်သော။
သင့်အား charger ၏ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုသင်အနည်းငယ်ပြောနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပါ တစ် ဦး အတန်ငယ်အထူးကြိုးမဲ့အားသွင်း ယင်း၏ပုံစံနှင့်ကကမ်းလှမ်းဘက်စုံများအတွက်။ ၎င်းသည်စက်ဝိုင်းပုံသဏ္andာန်ရှိပြီးအရွယ်အစားသေးငယ်။ အထူရှိသည်။ ဒါဟာ "သွားဖို့" တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အားသွင်းစက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မြန်ဆန်စွာသုံးရန်အဆင်ပြေပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ ဆက်ဆက်စိတ်ဝင်စားဖို့ option ကို။ AUKEY ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာအခုဝယ်ပါ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း။
AUKEY ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်၏အယူအဆသစ်။ အဆိုပါလေယာဉ် 15W ဖြစ်ပါတယ် ရှင်းလင်းစွာသစ်ကိုအားသွင်းခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်း iPhone 12 အတွက် Apple ကဒီဇိုင်းဆွဲသည် MagSafe။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကိုလည်းအားသွင်းနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် ဘက်ထရီအားသွင်းနေစဉ် charger အားအဆက်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားနိုင်သည်.
အင်္ဂါရပ်တွေ Qi ကြိုးမဲ့အားသွင်းမြန်နှုန်း 15W အထိလက်မှတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းများ၊ နားကြပ်များသို့မဟုတ်စမတ်နာရီများကဲ့သို့သောမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုအားသွင်းနိုင်သည်။ အပြင်, သူ့ ၁.၂ မီတာရှည်သော USB Type-C ပုံစံဖြင့်ကေဘယ်လ်၊ ၎င်းသည်အသုံးပြုမှုကိုမသက်မသာဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာ၏ပါဝါသို့မဟုတ်အချို့သော port ထဲသို့ချိတ်ဆက်ထားပါက။
အကယ်၍ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ကို ၀ ယ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက၊ ဒီမှာ AUKEY Aircore 15W ကိုရယူပါ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အသုံးပြု၍ အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
အဆိုပါ Aircore 15W charger ကိုတစ် ဦး p ပါရှိပါတယ်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုဘဲကိုင်ထားမည့်အခြားသံလိုက်areaရိယာ ငါတို့ကရွှေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့လက်၌ကိုင်လျှင်ပင်။ အရေးပါသည် ပထမ ဦး ဆုံးကြိုးမဲ့အားသွင်းရာမှပြောင်းလဲမှု မည်သူ့ကိုမှကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့ကိုအသုံးမပြုနိုင်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းများကိုစွန့်ခွာခဲ့ရသည်။
သတိရဖို့အရေးကြီးတဲ့အသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ် charger box ထဲမှာပါဝါ adapter ကိုရှာမတွေ့ပါ။ ငါတို့သည်သိရန်ရှိသည် ဒါကြောင့်လေယာဉ်အပြည့်အဝစွမ်းရည်မှာအလုပ်လုပ်သည် နှင့်၎င်း၏အများဆုံးအားသွင်းမြန်နှုန်း, 15W ရောက်ရှိရန် ကျနော်တို့ 18W သို့မဟုတ် 20W အကြားကွန်ယက်ကို adapter လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » AUKEY LS02 smartwatch analysis နှင့် Aircore 15W charger များ
Roborock's Onyx Dump Station သည်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။